Gbasara Anyị - Mestech Industrial Limited
Ebu emeputa na ihe ngwọta na-eweta, China
E hiwere Mestech na 2009, nke dị na Shenzhen, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndịda China. Mestech na-etinye aka n'ịkpụzi nrụpụta na ịkpụzi plastik. Ugbu a, anyị ịgbatị ọrụ anyị na ngwaahịa imewe, metal anwụ mgbatị, zọ na machining. Anyị na-enye ndị ahịa na onye-nkwụsị ọrụ si akụkụ okokụre ngwaahịa nzukọ.
The plastic akụkụ na metal akụkụ na ngwaahịa anyị na-emepụta na-ekpuchi ọtụtụ ubi.They gụnyere Industrial, Medical, Electronics, Electrics, Ọdụdọ, Auto akụkụ, Home Ngwa na Consumer ngwaahịa. Anyị na-agabiga ihe ndị ahịa anyị na-atụ anya site na inye ndị niile anyị na ha na-akpa ike na ịmepụta ọdịbendị nke na-agbakwụnye mmelite, nrụpụta na-arụ ọrụ na ntinye aka iji hụ na ndị ahịa anyị bara uru.
Lọ ụlọ ọrụ
Kemgbe ọ malitere, Mestech etinyewo aka n’inye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ dị mma ma dị elu. Anyị nwere ọkachamara otu ndị injinia, igwe akụrụngwa nke ọma na usoro njikwa njikwa. Anyị na-etinye nkà na ụzụ ọhụrụ na usoro nlekọta maka ịkọkọ ahụmịhe na ịkpụzi plastik, ntinye ọgwụ, nkedo nkedo, imepụta ngwaahịa na mgbakọ ngwaahịa iji gboo mkpa ndị ahịa. Site n'inweta ike, a na-ahụkarị ya n'akụkụ ndị a:
Anyị engineer otu
Ndị injinia anyị nwere ahụmịhe bara ụba na nhazi na n'ichepụta usoro nke akụkụ plastik, akụkụ igwe na ebu. Ha na-eji sọftụwia hazie ebu na ngwaahịa. Ha na-enwe ike inye ndị ahịa nkọwapụta ngwaahịa, ikekwe nyocha, nyocha ihe egwu yana azịza ya.
Ndị injinia Mestech nwere ike iji UG, PROE, Moldflow na sọftụwia ndị ọzọ maka imepụta akpụ na nyocha. Ebu anyị na-ekpuchi akụkụ akpaaka, akụkụ akụrụngwa ahụike, akụkụ ngwaahịa elektrọnik, ngwa ụlọ, eletriki ụlọ ọrụ, nchekwa gburugburu ebe obibi na mkpa kwa ụbọchị. Anyị na-enwe ike ịmepụta na imepụta HASCO na DEM ebu ebu dika ihe ndi ahia choro, ma wepu ha na mba ndi ozo na mpaghara.
Ndị injinia Mestech nwere ike soro ndị ahịa rụọ ọrụ iji nye atụmatụ akụkụ plastik na akụkụ akụkụ nke ngwaahịa ngwaahịa eletriki na ngwaahịa eletriki, yana nyocha ọrụ, tụlee ma chọta nsogbu ma nye ndụmọdụ ndozi, yana ịkpụzi ebu na imepụta ihe ndị a.
Anyị nwere engineering otu, ha na-eme ngwaahịa imewe na ebu imewe na oru ngo soro. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ ọhụụ n'aka gị nke chọrọ ịzụlite ebu na plastik akpụzi akụkụ, biko kpọtụrụ ndị ọrụ aka anyị, anyị ga-enyocha data gị ma zitere gị ụfọdụ ntụzi iji bulie akụkụ gị, nke a ga-eme ka ọrụ gị ga-abụ ihe ịga nke ọma n'oge ịkpụzi ebu ma chekwaa oge dị ukwuu maka ịkpụzi ebu.
Anyị factory na equipip
Ebu na ọgwụ ịkpụzi yana metal anwụ mgbatị na-ukwuu dabere na larịị nke akụrụngwa.
Na ebu ogbako, na mgbakwunye na ọkachamara imewe injinia, usoro injinia na ebu nna ukwu, anyị ụlọ ọrụ ifịk ifịk a elu ugbu a elu nhazi technology, onwem na elu CNC igwe ngwaọrụ, EDM ebua akpụ igwe, waya ọnwụ igwe ngwaọrụ. Usoro nhazi nke ngwa ngwa ngwa igwe anyị nwere ike iru 24000rpm.
Na mgbakwunye na ụdị ụdị ahụ niile, anyị na-akpụkwa agba agba agba abụọ, dozie biya biya ma tinye ihe nkedo, mee ka ọ pụta ìhè, ma mee nnukwu ebu n'ime 3 mita.
N'ihe banyere ịkpụzi ọgwụ na nkedo, anyị nwere ígwè ọrụ ịkpụzi site na 100 tọn ruo tọn 2000, igwe na-akpụzi agba agba abụọ na igwe eletriki na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Na mgbakwunye na ịkpụzi ọgwụ nke akụkụ plastik zuru oke, anyị nwere ike ịmepụta akụkụ agba abụọ, akụkụ nwere obere mgbidi na akụkụ buru ibu. Akụzi akụkụ nwere ike iru 1.5 mita ogologo na thinnest akụkụ ọkpụrụkpụ nwere ike ịbụ 0,50 mm
Anyị nwere igwe ntanye 32 nke ndị agha clamping na-ekpuchi 90T ~ 2000T, igwe ntụtụ abụọ, yana ndị ọrụ 50 ~ 60. Mmepụta ikike 1.5 nde akụkụ otu ọnwa.
Die nkedo omumuihe
Na ubi nke metal akpụ, anyị nwere ike inye ndị na-anwụ mgbatị mmepụta nke zinc alloy na aluminum alloy, nakwa dị ka nkenke machining nke ụfọdụ metal akụkụ. (biko rụtụ aka na peeji nke "metal die casting" na "CNC machining" maka nkọwa.)
Anyị na-ewebata njikwa ọrụ na usoro ERP na usoro mmepụta na nrụpụta. Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, anyị na-eme atụmatụ oge ma bulie usoro ahụ site na imewe, ị nweta ihe nnweta na nhazi, n'ichepụta, nyocha na mbupu, iji belata oge owuwu ahụ ma belata ọnụahịa maka ebu na mmepụta gị.
Usoro anyị dị mma
Ogo bụ àgwà dị mkpa iji hụ na ọrụ nke ngwaahịa. Anyị guzosie ike a zuru okè mma usoro na chepụtara àgwà Filiks na ụkpụrụ iji hụ na ngwaahịa mepụtara izute chọrọ nke ndị ahịa, na iji hụ na mmepụta nke ruru eru ngwaahịa ahịa. Gụnye
Na ebu n'ichepụta ogbo, anyị na-arụsi ọrụ ike ịlele àgwà ebe ebu imewe
1. Nyochaa ihe ọmụma banyere ihe ndị ahịa chọrọ
2. Ebu imewe feasibility nyochaa
3. Ebu ikpe imewe
4. Ebu ikpeazụ imewe nkwenye
5. Nnyocha na-abata nke nchara ígwè
6. Die machining akụkụ mmesho
7. Mmesho nke nhapu electrode
8. Nlele ule na nyocha
9. Nnwale ule ikpe
Na ọkwa mmepụta
1. Nkwenye nke akụkụ ndị ruru eru na ihe nlele
2. Mass mmepụta isiokwu mbụ nyocha
3. Nyocha nyocha
4. Nyocha zuru oke na nlele ntụpọ nke mbupu
5. Ogo nsuso
Anyị nwere ndị otu QC, yana nnwale & akụrụngwa akụrụngwa: 3D Nhazi igwe na igwe nyocha.
Anyị ọkachamara mbupụ ahia otu
Mestech na ndị mmekọ si ọtụtụ mba na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, anyị na-eme ụdị ebu dị iche iche na ngwaahịa maka ha, yana ọrụ nkwụsị. Anyị enweela ndị otu ọkachamara na mba ofesi. Ha maara teknụzụ ngwaahịa ma nwee ike isoro gị kwurị okwu gbasara etu esi arụ ọrụ, usoro, azụmaahịa na ihe banyere ibu azụmahịa. Ha nwere ike ịghọta ihe ị chọrọ nke ọma ma nye gị ngwaahịa na ọrụ ndị kwesịrị ekwesị.